Haddaad caruur leedahay iyo haddii kaleba aqri qormadan (fadlan) - Caasimada Online
Home Caafimaad Haddaad caruur leedahay iyo haddii kaleba aqri qormadan (fadlan)
Haddaad caruur leedahay iyo haddii kaleba aqri qormadan (fadlan)
Seexinta carruurta qadada ka dib, faa’iido ma u leedahay?
Hurdada duhurkii waa la isku waafaqsan yahay in ay faaido u leedahay qof walba oo jiifto ha ahaado caruur ama qof weynba.
Diinteenana waa na fartay in aan jiifsano duhurtii maadaama uusan shaydaanka jiifanin.
Cilmibaarista la sameeyay waxaa lagu ogaaday duhurta oo la jiifto in laga faaidayso dhowr arrimood oo ay ka mid tahay;
1- Waxay kordhisaa feejignaanta: baaritaan ay samaysan NASA waxaa lagu ogaaday hadduu qofka jiifsado 40 daqiiqo in ay ku filan tahay in feejignaantiisa ay gaarto 100$, tamarne uu ka helayo.
2- Waxay kobcisaa waxbarashada iyo shaqaa maskaxda, qofka markuu jiifsado, xasuustiisa way siyaadaa sida la arkay.
3- Waxay isku habaysaa warbixinnada maskaxda lagu keydiyo, qofkane wuxuu soo kacaa isagoo nastay, awoodne u leh in uu warbixin cusub ku keydiyo maskaxdiisa, hilmaankane wuu ka yaraadaa.
4- Qofka waxaa ka yaraado diiqada iyo wewelka, hormoonka u qaabilsan stress-ka ee Cortisol wuu yaraadaa, taasina waxay ka badbaadisaa qofka dhibaatooyin caafimaad badan oo ay ka mid tahay: korriin xumo, sonkorow, dhiigkar, hilmaan, xifdin la’aan iyo cudurrada wadnaha ku dhaco.
Faaidooyinka ay leedahay duhurta oo la jiifto mid la soo koobi karo maahan ee akhristow haddii aadan jiifanin duhurtii faaido badan ayaa kaa maqan, haddii aad arday tahay oo aad rabtid in aad waxbarashdaada ku saro martid, duhurtii jiifo, kadibna wax akhris u fadhiiso, waad ku guuleysan doontaa.
Baaritaan lagu sameeyay arday dhigato jaamcad ku taallo ingiriiska, waxaa la arkay in ardayda jiifato duhurkii ay 20% ay ka horreeyaan xagga dhinac kasto ardadyda aanan jiifanin.